Yusuf Garaad: Ku-Sime Jagadiisu maxay tahay?
Ku Sime Kursi Ma aha
Ku-Simaha Madaxweynaha iyo Ku-Simaha Ra’iisal Wasaaraha iyo Ku-Simayaasha kale sow iyagu derajo ma hayaan oo jago kuma magacowna?
Maxaa keenay in xilkoodu uu durba isu beddelo Ku-Sime isla marka mas’uulka kale uu dibadda u duulo?
Saxaafadda waxaa la gudboon in qofka xilkiisa iyo magaciisa ay ku sheegto. Marka ay dhacdo sabab kallifi karta in la sheego xilka Ku-Simaha ah ee uu hayana la sheego mar ama laba jeer taas oo ku xiran dhererka wabixinta.
Marka uu Ku-Simuhu gaaro go’aan culus ama sida caadiga ah aan xilkiisa ahayn ayaa si loogu xoojiyo ama loo caddeeyo sababta, waxaa markaa la sheegaa in uu Ku-Sime yahay.
Ka soo qaad haddii Guddoomiyaha Baarlamaanku uu gaaro go’aan ku saabsan howsha Xukuumadda. Si aan loogu wareerin warka waxaa habboon in la sheego in uu yahay Ku-Simaha-Madaxweynaha.
Ka soo qabo haddii Wasiirka Difaacu uu go’aan ka gaaro Booliiska, dabcan waa in la xusaa in uu yahay sii hayaha Wasaaradda Amniga Qaranka. Inkasta oo tusaalaha dambe uu yahay Sii-Haye kaas oo ah mid ka duwan Ku-Sime.
Laakiin anigu ma aqaan meel ay Ku-Sime ku noqotay jago iskeed u taagan oo weliba ka horreysa midda mas’uulku uu ku magacaaban yahay.
Weliba Ku-Sime waxaa la qaatay haddii mas'uulka xilka lagu simayaa uu fasax caafimaad ama mid kale uu shaqada uga maqan yahay sida berigii uu Madaxweynuhu tegey Turkiga. Laakiin marka mas'uulkii uu shaqo ugu maqan yahay meel kale, ma habboona in Xilkiisu uu u muuqdo mid laba loo qeybiyay. Waa shaqada uu isagu ka hayo meesha uu markaa joogo, oo kolley iyadina saxaafadda soo geleysa. Iyo Midda qofka Ku-Simaha u ahi uu qabanayao.
Farriintan xooggeedu wuxuu ku socdaa weriyayaasha iyo Tifatirayaasha.
Posted by Yusuf Garaad at 07:54:00